Phupha ngeRosari eyaphukileyo / Mnyama / Mhlophe / Mhlophe [ + Ukhuseleko]
kuqala » Amaphupha » phupha ngerosari
Sinamaphupha amaninzi ahlukeneyo kubomi bethu bonke, kodwa phupha ngerosari okanye irosari Inentsingiselo eyomeleleyo ekufuneka abantu abaninzi bayazi ngayo.
Unokucinga ukuba bubuxoki, kodwa inyaniso kukuba amaphupha ethu anokusinceda ngamaxesha ahlukeneyo ebomini bethu.
Uninzi lwazo lusinika imiyalezo malunga nokuba kwenzeka ntoni na.
Ngezi zilumkiso sinokulungiselela amaxesha amnandi kangako ebomini bethu kwaye ke sinokuzikhusela.
Kodwa musa ukuqhubeka ucinga ukuba onke amaphupha mabi, kukho ezinye ezineentsingiselo ezilungileyo, kwaye kulo mzekelo Isithathu inokuba nentsingiselo entle abantu abambalwa abayaziyo.
Masiqhubeke siqingqa ukubaluleka kweli phupha. nokuba irosari yaphukile, nokuba imdaka, imhlophe, imnyama okanye isesandleni sakho.
Kuthetha ukuthini ukuphupha irosari
Owesithathu uthetha into enye kuphela: ukhuselo.
Olu khuseleko lunokunxulunyaniswa nabantu abathile abafuna ukwenzakalisa okanye into embi enokwenzeka.
Kwezinye iimeko ezigqithisileyo ide ithethe nokuba siyakhuselwa umntu osele efile, kodwa oku kwenzeka kuphela xa irosari imhlophe.
Kodwa ngendlela eqhelekileyo kakhulu ithetha ukuba sikhuselwe nguThixo okanye sifuna uncedo lwakho ukuze sihlale sikhuselekile.
Intsingiselo yayo ecace ngakumbi iya kufuneka ityhilwe ngokwerosari, oko kukuthi, enoba yayimnyama, imhlophe, okanye olunye uphawu.
Ukukunceda ngokuchanekileyo, sityhila ngezantsi kuzo zonke iintsingiselo zamaphupha, zijonge zonke kwaye ubone ukuba yeyiphi ehambelana nephupha lakho.
Phupha ngerosari eyaphukileyo
Irosari eyaphukileyo ayiyonto imnandi kakhulu ukuphupha ngayo.
Nangona eli liphupha elinqabileyo, inyaniso kukuba abantu abaninzi banalo ngamaxesha amabi obomi babo kwaye bacinga okubi kakhulu, kuba isithathu esaphukileyo asilophawu olubi.
Eli phupha lithetha ukuba uya kufuna lonke uncedo onokulufumana kwiintsuku ezimbalwa ezizayo zobomi bakho.
Kuya kuvela umceli mngeni, umceli mngeni omkhulu, oya kukufumanisa kunzima ukujamelana nawo kwaye uya kufuna lonke uncedo olunokwenzeka ukuze ukwazi ukuloyisa.
Lo mngeni unokunxulumana nokuphela kobudlelwane, ukugxothwa okanye nokufa komntu.
Qaphela ngeli phupha, ukuphupha i-rosari ephukileyo akulona uphawu oluhle, sincoma ukuba uthandaze kancinci ukuze uzame ukuthambisa okanye ukukhusela oku kungenzeki.
Sinomthandazo wokhuseleko ekupheleni kweli nqaku, kufuneka uwuthandaze namhlanje.
Phupha ngerosari emdaka
UBrown ngumbala omnyama, kodwa ungekho mnyama njengomnyama, ngoko akufanele ukhathazeke kakhulu.
Xa sinolu hlobo lwamaphupha, oko kuthetha ukuba uya kujongana notshaba kwiintsuku ezimbalwa ezizayo kwaye uya kufuna uncedo lokuloyisa.
UBrown ngumbala otolika umngeni, oko kukuthi, uphantse ube mnyama, ongumbala ombi, wobumnyama, wobubi…
Zilungiselele, kukho umntu ebomini bakho ozenza umhlobo wakho kakhulu, kodwa akakuthandi ncam.
Lomntu uzoziveza nawe uzokhathazeka kakhulu ngalonto ngoba ubumbambile.
Jonga ngeenxa zonke, uvavanye bonke abantu odibana nabo, uya kumangaliswa ngumntu ongamlindelanga.
Ukuba irosari emdaka yaphukile, nikela ingqalelo ngakumbi, iya kukugungqisa ngakumbi!
ukuphupha irosari emhlophe
Eli phupha linentsingiselo ebalaseleyo kwaye abantu abaninzi bathanda ukungakholelwa kulo.
Ukuba uphuphe nje ngerosari imhlophe luphawu lokuba kukho izinto ezizama ukukuwisa, kodwa ngethamsanqa isalamane sakho esingasekhoyo kweli hlabathi siyakukhusela.
Ufanele ukukhuselwa yaye ngokwenene ukhuselwe nguThixo ngoncedo lwesalamane esasikuthanda gqitha.
Yiba kakuhle, wonwabe, phila ubomi bakho ngokuqhelekileyo, yiloo nto eyona nto ifunwa ngabo bakuthanda kakhulu.
Ukuba ubunalo eli phupha, vuya, ungumntu okhethekileyo kwaye kukho umntu "phezulu" othandazelayo, ekukhusela, kunye nalo lonke uthando emhlabeni.
Akunakwenzeka ukuba wazi ukuba ungubani na, kodwa ukuba ucinga kancinci, ungafika apho.
Isenokuba ngumama, utata, umnakwabo okanye utatomkhulu okanye umakhulu.
Into eqinisekileyo kukuba iqhelekile kuwe.
iphupha lerosari emnyama
Sifumana umdla ukuba intsingiselo yokuphupha ngerosari emnyama ayikho kwenye indawo.
Enyanisweni liphupha elingaqhelekanga kakhulu, kodwa inyaniso kukuba kukho abantu abanalo.
Umnyama ubonisa ubumnyama, ukufa, isithukuthezi kunye nosizi.
Ngumbala olusizi kwaye ombi ukuphupha ngawo.
Kunye nesithathu senza iphupha elinqabileyo kakhulu elinentsingiselo ephawulekayo.
Eli phupha lithetha ukuba kukho amandla omoya angalunganga azama ukukwenzakalisa.
Xa sithetha ngamandla omoya angalunganga sithetha ngawo amandla amabi, iliso elibi, umona, umona nomsindo.
Ngamandla asuka komnye umntu aye komnye azama ukukuchaphazela kakubi.
Isenokuba ngumona ngobomi bakho, ukuqumbela umyeni wakho, okanye ukumonela impumelelo yakho.
Ngethamsanqa uyakhuselwa ixesha elininzi kwaye ngethamsanqa awuzukuziva nolu hlaselo.
Into esiyincomayo kukuba uhlale kude nabo bonke abantu obonayo abafuna ukukwenza okubi, ukuba uhlale kude nabahlobo bobuxoki neentshaba zokwenene.
Phila ubomi obuqhelekileyo kwaye uphephe ukutsala inkangeleko eninzi.
Phupha ngerosari esandleni
Ukuba nolu hlobo lwephupha kuqhelekile kwaye kuthetha ukuba kufuneka ube nokholo ngakumbi kwaye ukholelwe ngakumbi kubukho bukaThixo.
Enye into eliphupha elithetha ngayo kukungabikho konxibelelwano noThixo, oko kukuthi, uthandaza kancinci, uthetha kancinci noThixo, uye kwimisa intsuku ezimbalwa, loo nto ikwenza ube noluhlobo lwephupha.
Ngokuqhelekileyo ayithethi ububi, ungakhathazeki.
Ukuba unalo eli phupha ngokuphindaphindiweyo luphawu lwesilumkiso, luphawu lokuba kufuneka uthandaze ngakumbi kwaye ube nokholo ngakumbi kuThixo.
Irosari kwindawo ewileyo emhlabeni
Ukuba ubona i-rosari elele phantsi ngexesha lephupha, kunokwenzeka ukuba ujoliswe ngohlaselo oluninzi oluvela kwiintshaba ongenakukwazi ukuxhathisa.
Kukho abantu abangakuthandiyo kwaye uyabazi ukuba bangoobani na, kodwa awuhambi umke kubo, ngaloo ndlela ubavumela ukuba bakuvise ubuhlungu.
Sincoma ukuba ujonge kakuhle malunga nawe kwaye ubone ukuba ngubani ofuna ukukulimaza.
Suka kwaba bantu kwaye uthandaze rhoqo ngokholo olukhulu.
Eli phupha libonakala kwabanye abantu, ukuba libonakala kuwe libonisa ukuba kufuneka uthandaze kwaye umke emntwini.
Ukuba ujonge ukhuseleko qhubeka ufunda eli nqaku, sinelikhulu apha ngezantsi!
Ukukhuselwa kuwo onke amaphupha
Njengoko usenokuba ubonile kulo lonke eli nqaku, akusoloko kulungile ukuphupha irosari.
Kukho izinto ezimbi ezinokwenzeka ebomini bakho kwaye eyona ndlela yokuzikhusela kukuthandaza ngokholo oluninzi.
Omnye wemithandazo esebenzayo esiyincomayo kubo bonke abafundi bethu ngu Umthandazo weNenekazi lethu laseDesterro.
Lo mthandazo unamandla uyakugcina bonke ububi kuwe kwaye uya kuthintela izinto ezimbi ukuba zenzeke kuwe nakwabo ubathandayo.
Sikwacebisa abanamandla umthandazo wokuzolisa intliziyo.
Lo mthandazo uya kukunceda ukuba uzole kwaye uya kukuthintela ukuba ungaphuphi ngezinto ezimbi.
Ungathandaza le mithandazo mibini ngaphambi kokulala okanye xa uvuka, ndikholelwe ukuba baya kubuphucula ubomi bakho kakhulu!
ukuphupha isalamane esifileyo
phupha imango evuthiweyo
Akunzima ukufumana i Intsingiselo yephupha leRosari, kodwa inyaniso ikukuba akusoloko kuyinto esiyilindeleyo.
Ukuba awukayiphenduli yonke imibuzo yakho, unganqikazi ukushiya inkcazo encinci apha, siya kuvuya ukuyiphendula ngokukhawuleza.
1 Kuthetha ukuthini ukuphupha irosari
1.1 Phupha ngerosari eyaphukileyo
1.2 Phupha ngerosari emdaka
1.3 ukuphupha irosari emhlophe
1.4 iphupha lerosari emnyama
1.5 Phupha ngerosari esandleni
1.6 Irosari kwindawo ewileyo emhlabeni
2 Ukukhuselwa kuwo onke amaphupha
NgoJulayi 24, 2018, 2: 41 pm
Ndiphuphe ndifumana irosari emhlophe kumfundisi, kodwa ndithe xa ndiyivula yaphuka ezandleni zam, ndaya kumfundisi ndathi yophukile wandinika enye, ndifuna eluhlaza, kodwa wandinika. nam omhlophe kwakhona, yayiyirosari entle kwaye nemvakalelo ephupheni yayimnandi, yokuhlangana kweqela lecawa.
NgoSeptemba 4, 2018, 6: 05 pm
Ndiphuphe ndisiya emgidini ibingathi ndithathe irosari ndingacinganga ukuba yawa emva koko ndayithatha yabe imhlophe rosari ndaphuma ndayibona iphukile enye irosari engqondweni yam then ndayigcina. I rosary ndayithatha and like at the party ayemaninzi amantombi ajolayo engafihlwanga notata wayekwi party nam and on the way out kwenzekile ndafumanisa I rosary is very confusing iso.
NgoSeptemba 25, 2018, 10: 46 am
Ndiphuphe ndingena endlini engenanto kwaye endingayaziyo kukho isithathu kwisithathu isibini esimnyama esiluhlaza kunye nesinye esiluhlaza okotshani, kwabe sekuthi mna nomama ebekwelo phupha wathatha iirosari wathi uzohamba nazo zikhona. Amakhonkco amabini alula wawathatha nayo kwaye indlu yanika i-medinho sert
Nge-24 ka-Okthobha 2018, 7: 16 pm
Ndiphuphe ngathi sisakhiwo, okanye indlu endala, andisakhumbuli kakuhle.
I rosari yayinziwe ngamatye apinki ngathi yi quartz epink, amatye angaqhelekanga kwaye ndicinga ukuba ndandiyifumene kuMakazi othandekayo owavela ephupheni, kwaye umyeni walo anti wam wasweleka kwinyanga edlulileyo. kwaye ndikhumbula kakuhle, ndothuka xa ndibona I rosari iqhekeziweyo, phakathi kokungcola, izitena, kwaye lo malumekazi wam wayehamba nam, ngenxa yeso sizathu ndicinge ukuba ndiphumelele,,, kodwa. Andikhumbuli ndifumana ezandleni zakhe.